Kusvirwa neCustomer Yangu Tisingazivane Mazita ! – Vanoda Zvinhu
Ndaishanda parestaurant kuMidrand ndiri waiter hangu and there was murume aiuya everyday but ndainge ndisingazive zita rake.
Aiyita kunge munhu anoshandira around nekuti aiwuya akapfeka worksuit achibva kubasa, ndaingoona munhu achinwa energy drink achiputa fodya. Mumwe musi ndakamuona asati apinda ndikabva ndangomutarisa zvekuti akatanga kuzvitarisa iye achifunga kuti maybe there was something wrong naye. Paakapinda this time akaudza manager wangu kuti aida kuti ndimusevhe inini. Ndakaenda kwaari ndokuti sorry sir but shift yangu yatopera ndichakupai munhu anokubatsirai.
Akabva ati ndaguta saka I will wait for you ndikuperekedze kumba somehow ndakati yes semunhu wandaiwona almost everyday.We walked back kumba kwangu just down the block from kubasa kwangu. Takapinda mukaBachelor flat yangu iye ndokubva amira pamberi pangu akabvisa jacket rake ndokubva abvisa clip yandainge ndaisa mubvudzi mangu ndokubva rayerera kumusana kwangu, he said ndakanaka with bvudzi rangu risina kusungwa ndikati I work in a restaurant ndinofanirwa kurisunga.Akabva andikisa and ndakamukisawo back.
Ndakabvunza kuti anonzi ani zvikanzi mazita haana basa, ndakakiswa ndikanzwa kumerera muviri wese ndikabva ndaisa maoko angu around mashoulders ake iye ndokubva anyatsobata magaro angu achindidhonzera kwari. Ndakapfugama pasi ndikamuvhura zip ndichiburitsa mboro yake ndikabva ndaiyisa mumuromo ndakainanzva zvekuti ndakanzwa munhu achichemerera nekunakirwa. Ndakasimuka akabva andikisa akadzikisa jean kusvika pamabvi ndokubvisa bra rangu akabva andigarisa paedge yebed ndokupfugama achienda pakati pemakumbo, akandikisa kisa zvidya achikwidza kusvika pabeche rangu. Akatanga kundidya matinji achiisa rurimi rwake mubeche kukabva ndatota plus ndaibva ndanzwa kuda kusvirwa.
Haana kumirira ipapo akaenda kumazamu nekuminyatso yainge yaoma kare achindikisa kusvika pamuromo I could taste juice yebeche rangu pamalips ake. Akaisa zimboro rake mubeche rangu slowly ndchibva ndabhendesa musana wangu ndichiisa makumbo angu around him. Akandipindurudza akanditarisisa pasi akabva aipfekedzera nekumashure akanyatsonyudza mubeche rangu ndikabva ndatunda nekuchema nekunakirwa nemboro. Akabva atanga kundisvira zvakasimba zvine speed achibva atunda tichibva tangorara breathing in the moment.
· Last modified September 4, 2014 0
Kukwira mai zvose nemwana
Next story She begged me ndimukwire ndamudeedza kudiscplinary hearing
Previous story Makweshero andakaita mukadzi wa Boss!